Akụkọ - Ọnụ ụzọ gas gas
1. Banyere ụdị mmiri mmiri
Iji mmiri mee ihe iji ikuku ikuku ejikọtara, ụlọ ọrụ ga-ekwenye na ojiji nke mmiri ndị ọzọ nke oge ahụ.
2. Condensate ọnọdụ mmiri
Ikuku na-eme ka mmiri jikọtara ya na mmiri a kpokọtara ga-abụ ihe kpatara nrụrụ ọrụ nke ihe ọkụkụ. Tupu nzacha ahụ, ndị na-ehicha ikuku, ọnyà condensate kwesịrị itinye.
3. Condensate drainage njikwa
Ozugbo echefuru condensate iji gbapụ ikuku ikuku, condensate ahụ ga-esi n'akụkụ abụọ ahụ pụta, na-akpata nrụrụ ọrụ nke ihe ọkụkụ. Condensate orùrù management nwere ike n'oge, ọ na-atụ aro iji nyo na akpaka drainage.
4. Banyere ụdị ikuku
Afọ agbakọtara nwere kemịkal, mmanụ sịntetik nwere ihe mgbaze mmiri, nnu, gas na-emebi emebi, wdg, ga-abụ ihe kpatara mbibi na omume ọjọọ, ịghara iji.
5. Ekwesiri itinye ikuku ikuku
N'akụkụ n'akụkụ elu nke valvụ ahụ, a ga-etinye nza maka nzi ezi nke 5µ m na-agbaso nzacha ikuku.
6. Mgbe ịtọchara ngwa nju oyi, draya ikuku na onye na-anakọta mmiri mmiri, wdg.
Afọ agbakọtara nwere nnukwu mmiri mechiri emechi, ga-eduga na valvụ na ihe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ nke ihe ọjọọ ahụ, ya mere ekwesịrị ịtọ usoro ikuku gas mgbe ihe nju oyi, ikuku ikuku na onye nchịkọta mmiri, wdg.
7. Toner na ndị ọzọ n'oge ke upstream n'akụkụ nke valvụ, kwesịrị ịtọ mmanụ alụlụ separator
Mgbe toner nke ikuku ikuku na-eme, tinye na valvụ ahụ, valvụ ahụ ga-eme ka ọ ghara ime ihe.
Zuru ezu chọrọ maka àgwà nke abịakọrọ ikuku, lee ụlọ ọrụ ahụ "abịakọrọ ikuku ọcha usoro".
8. Agbanye mmiri n’agaba
A ga-ahapụrịrị mmiri dị na ikuku ikuku dị ọcha.
9. Maka mmanụ
Na-agbanwe akara ikpuchi solenoid, ozugbo mmanụ, mmanụ ga-aga n'ihu.
Ekwesịrị iji turbine Nke 1 (enweghị mgbakwunye) VG32 ISO. Na mgbakwunye na mmanụ mmanu, ga-eme ka valvụ ahụ ghara ịrụ ọrụ, wdg.
10. Mkpofu piping
Piping tupu zuru blown ma ọ bụ saa net anwụrụ ọgwụgwụ ọnwụ, ịcha mmanụ ma ọ bụ ájá wdg.
11. Winding usoro nke oru teepu
Pipe na ọkpọkọ ọkpọ bụ oge nke njikọ njikọ, ekwela ka eriri paịpụ ntụ ntụ dị mma na eriri akara nke irighiri ihe a gwakọtara na ọkpọkọ dị n'ime. Mgbe ejiri teepu akara ahụ, a ga-ewepụta ihu ihu nke eriri ịchekwa ya na nsonye 1 eri ka ị ghara ịgbanye gburugburu teepu ahụ.
Ejila gas na-emebi emebi, kemịkalụ, mmiri, mmiri, gburugburu ebe obibi mmiri ma ọ bụ ebe nwere ihe ndị a dị n'elu.
13. Chebe usoro ndị kwekọrọ na IP65 na IP67 (dabere na IEC60529) ngwaahịa, (ájá na mmiri) n'elu ájá na mmiri nwere ike ịchekwa. Ma ike ga-eji na mmiri, kwesịrị ntị ka.
14. kwekọrọ na ngwaahịa IP65 na IP67, ntinye ahụ kwesịrị ekwesị iji zute nkọwa ha, ọ dị mkpa iji gụọ ihe edeturu nke ngwaahịa ọ bụla.
15. Flammable gas, ikuku mgbawa ikuku, ejila, ka ewepu iwe oku na oku. Ngwaahịa a enweghị mgbochi mgbawa Ọdịdị.
16. Ejila ebe jijiji na ujo.
17. Ebe a na-ekpughere anyanwụ, kwesịrị ịgbakwunye mkpuchi nchedo, kpuchie anyanwụ.
18. Onwere ebe gbara okpomoku si, igwe oku ekwesiri ikwusi.
19. N'ebe enwere mmanu mmanu ma obu ihe nkpuchi na ebe ndi ozo, kwesiri ichota ihe nchebe.
20. Solenoid valvụ arụnyere na njikwa kabinet, ogologo oge na ike nke oge, kwesịrị ime okpomọkụ jikọọ iji hụ na solenoid valvụ na ọnọdụ okpomọkụ kwere.
21 Mmezi na nyocha ga-eme dịka usoro nke ntuziaka ntuziaka.
Ozugbo ejiri ya, ọ ga-ebibi ndị ọrụ, mmebi, ma ọ bụ mebiri ndị ọrụ ahụ.
22. Ihe mejuputara ikuku ma kwukota ya na ekpofu
Na nkwenye ahụ site na ịkwọ ụgbọala ihe ahụ ka emepụtara iji gbochie mkpofu ọdịda ma gbochie mkpofu nke runaway, bepụ gas na ike ọkọnọ, usoro ikuku nke ikuku nke ikuku agbakọtara site na usoro nrụpụta nrụpụta ihe na-atọgbọrọ, ka ibuputa ihe ndi mejuputara. Tụkwasị na nke ahụ, atọ n'etiti etiti akara ma ọ bụ valvụ ụdị nkwusioru, a ga-atọpụkwa valvụ ahụ na silinda ahụ dị n'etiti ikuku fọdụrụnụ.
Mgbe nnọchi ma ọ bụ nwụnye ihe ndị ọzọ, nke mbụ iji gosipụta ihe na-eme ka ikuku ọkụ na ihe ndị ọzọ emeela iji gbochie mkpofu ngwa ngwa nke mkpofu ahụ, wee kwado ọrụ nkịtị nke mmiri.
23. Ugboro ojiji ji ya
Iji gbochie mmegharị valvụ ahụ adịghị mma, valvụ ahụ kwesịrị ịdị n'ime ụbọchị 30 iji mee mgbanwe mgbanwe otu ugboro, biko attentionaa ntị na njide nke ikuku.
24. Iji aka eme ihe
Iji aka arụ ọrụ, ngwaọrụ ahụ kwesịrị ijikọ aka na arụmọrụ, wee gosipụta ọrụ nchekwa ahụ.